Queen ပရိသတ်တွေအတွက် 'Bohemian Rhapsody' ရုပ်ရှင်ရဲ့ Trailer ထွက်ပေါ်လာပြီ
Queen ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ‘Bohemian Rhapsody’ ရုပ်ရှင်ရဲ့ Teaser Trailer ထွက်ပေါ်
16 May 2018 . 12:28 PM
၁၉၇၀ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ ဝိုင်းသားတွေအနေနဲ့ Freddie Mercury ၊ Brian May ၊ Roger Taylor နဲ့ John Deacon တို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Queen အဖွဲ့ဟာ “Bohemian Rhapsody’ ၊ ‘We Will Rock You’ တို့လို သီချင်းတွေနဲ့ ဂီတသြဇာအရှိန်အဝါအရမ်းကို ကြီးမားတဲ့ Rock Band တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ Queen ပရိသတ်တွေအတွက် ‘Bohemian Rhapsody’ ဆိုတဲ့ Queen ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိနဲ့ ၁၉၈၅ မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ Live Aid ရှိုးအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို 20th Century Fox က တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ခေါင်းဆောင်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ Freddie Mercury နေရာအတွက် Mr. Robot ဇာတ်ကားရဲ့ သရုပ်ဆောင် Rami Malek က သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားအတွက် Freddie Mercury ဖြစ်အောင် သူအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
‘Bohemian Rhapsody’ဇာတ်ကားကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်က စတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အစတုန်းကတော့ Freddie Mercury နေရာအတွက် မင်းသား Sacha Baron Cohen ကို လျာထားခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ Baron Cohen က ဆက်သရုပ်မဆောင်တော့ဘဲ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Queen ရဲ့ ဝိုင်းတော်သားဟောင်းတွေနဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ မတူညီလို့ပါတဲ့။
Sacha Baron as Freddie Mercury
ကြားထဲမှာ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးအပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ပြီးမှ Rami Malek ကို Freddie Mercury အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာမှ ကြေညာနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Bohemian Rhapsody ရဲ့ Teaser Trailer ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး လက်ရှိ YouTube မှာ Trending No.1 အနေနဲ့ ၁၆နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ရေ ၃.၅ သန်းရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Teaser Trailer ကို ကြည့်မိရင်တော့ Rami Malek ရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ Freddie Mercury နဲ့ တူညီတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး Queen ရဲ့ အနုပညာပုံရိပ်တွေနဲ့ သီချင်းတွေကို တွေ့ရမှာလည်း အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ခမ်းနားတဲ့ Rock Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Queen ရဲ့ Freddie Mercury ဟာ AIDS ရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေနဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Freddie Mercury မသေဆုံးခင် ဖော်ျဖြေခဲ့စဉ်က
Freddie Mercury အလွမ်းပြေ ‘Bohemian Rhapsody’ ကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Ref : theguardian.com
Queen ပရိသတျတှေ အကွိုကျတှစေ့မေယျ့ ‘Bohemian Rhapsody’ ရုပျရှငျရဲ့ Teaser Trailer ထှကျပျေါ
၁၉၇၀ ခုနှဈက စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီးတော့ ဝိုငျးသားတှအေနနေဲ့ Freddie Mercury ၊ Brian May ၊ Roger Taylor နဲ့ John Deacon တို့နဲ့ ဖှဲ့စညျးခဲ့တဲ့ Queen အဖှဲ့ဟာ “Bohemian Rhapsody’ ၊ ‘We Will Rock You’ တို့လို သီခငျြးတှနေဲ့ ဂီတသွဇာအရှိနျအဝါအရမျးကို ကွီးမားတဲ့ Rock Band တဈခုဖွဈပါတယျ။
အခုတော့ Queen ပရိသတျတှအေတှကျ ‘Bohemian Rhapsody’ ဆိုတဲ့ Queen ရဲ့ အတ်ထုပတ်တိနဲ့ ၁၉၈၅ မှာ လုပျခဲ့တဲ့ Live Aid ရှိုးအကွောငျးရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားကို 20th Century Fox က တငျဆကျပေးလိုကျပါပွီ။
ဒီဇာတျကားမှာ ခေါငျးဆောငျအဆိုတျောဖွဈတဲ့ Freddie Mercury နရောအတှကျ Mr. Robot ဇာတျကားရဲ့ သရုပျဆောငျ Rami Malek က သရုပျဆောငျထားတာ ဖွဈပွီး ဒီဇာတျကားအတှကျ Freddie Mercury ဖွဈအောငျ သူအတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားထားတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
‘Bohemian Rhapsody’ဇာတျကားကို ၂၀၁၀ ခုနှဈက စတငျရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး အစတုနျးကတော့ Freddie Mercury နရောအတှကျ မငျးသား Sacha Baron Cohen ကို လြာထားခဲ့ပွီး ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာတော့ Baron Cohen က ဆကျသရုပျမဆောငျတော့ဘဲ နှုတျထှကျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Queen ရဲ့ ဝိုငျးတျောသားဟောငျးတှနေဲ့ သဘောထားအမွငျတှေ မတူညီလို့ပါတဲ့။
ကွားထဲမှာ သရုပျဆောငျတှနေဲ့ ထုတျလုပျရေးအပွောငျးအလဲတှေ အမြားကွီး ဖွဈပွီးမှ Rami Malek ကို Freddie Mercury အဖွဈ သရုပျဆောငျမယျလို့ ၂၀၁၆ နိုဝငျဘာမှ ကွညောနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ Bohemian Rhapsody ရဲ့ Teaser Trailer ထှကျရှိလာခဲ့ပွီး လကျရှိ YouTube မှာ Trending No.1 အနနေဲ့ ၁၆နာရီအတှငျး ကွညျ့ရှုမှုအကွိမျရေ ၃.၅ သနျးရှိနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
Teaser Trailer ကို ကွညျ့မိရငျတော့ Rami Malek ရဲ့ အသှငျအပွငျနဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှဟော Freddie Mercury နဲ့ တူညီတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပွီး Queen ရဲ့ အနုပညာပုံရိပျတှနေဲ့ သီခငျြးတှကေို တှရေ့မှာလညျး အသအေခြာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို ခမျးနားတဲ့ Rock Band တဈခုဖွဈတဲ့ Queen ရဲ့ Freddie Mercury ဟာ AIDS ရောဂါရဲ့ နောကျဆကျတှဲရောဂါတှနေဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှဈမှာ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
Freddie Mercury မသဆေုံးခငျ ဖြေျာဖွခေဲ့စဉျက
Freddie Mercury အလှမျးပွေ ‘Bohemian Rhapsody’ ကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှဈနိုဝငျဘာလ ၂ရကျနမှေ့ာ စတငျပွသမယျလို့ သိရပါတယျ။